Ndakabatwa ndichisvira mukadzi wemunhu ndichibva ndatsikwa Jende! – Makuhwa.co.zw
Ndakabatwa ndichisvira mukadzi wemunhu ndichibva ndatsikwa Jende!
Kubatwa ndichisvira mukadzi wemunhu – Murume wacho akanditsika JENDE!!! yedu yekuda kusvira vakadzi vevanhu, one day ndakamama and up to now mboro haimire. Ndakasangana nemukadzi uyu MaOK muHarare and ndakamusona kusvika abvuma kundipa number yake.
Handina kunonoka kumutsvaga and ndakamuudza ka1 kuti ndaida kumusvira and i did not care kuti ane murume or vana. Iye akadyira and ndokubvuma kundipa address, ndakamuudza kuti andibate when murume wake is away and akabvuma. Friday ndakamunetsa kusvika anditi ndiuye for a short time. Ndakarova VW Passat yangu ndakananga ikoko and ndakasvika ndikawana mukadzi akachena nemajeans aibata muvuri kuratidza macurves ese. Ndakamubatagaro ndikaona munhu achiresponder and ndokumutakura naye mumba. Ndakamubvisa hembe dzese ndokutanga kuyawa zamu ndakamubata beche ndikaona akatota.
Ndakamurarisa pabed ndokumusvira fast sezvo we didn’t have time. Ndakamurova nemboro via missionary ndakasimudza makumbo mudenga. Kakati yaive flexible. Ndakasvira kusvika akuyuwira nemboro. Ndakadzupura ndokumuti arare nedumbu, ndichida kumusvira nekumashure, Ndichida kupinza mboro kudai ndakayeva magaro ndakangonzwa pain yakasimba paFace pangu yakaita kuti ndimbotadza kuona for 3 mins.
Ndakavhura maziso ndokuona kuti ndaive pasi paFloor and paive nemurume anda akabata chisimbi. Ndakabva ndaziva kuti nhasi ndawacha. Akandirova naro kumusana and ndakarwadziwa. But akandiratidza kuti handina kungwara paakanditi ndirare pasi ndakatarisa mudenga. That time ndakanzwa vanhu vazara panze ndikaziva kuti nhasi ndapinda ma1. Ndakarara pasi ndakatarisa mudenga and ndakaona murume uya achipfeka safety shoe yake ndokuuya ndokutsika machende angu nayo. I am sure ndakambofainter coz pain yandakanzwa ipapo i wished kuti dai angondiuraya hake. Akatsika futi and the next thing i remember is ndakaona ropa and i woke up in hospital.
Masasi Ndakabata mboro ndikaona iripo asi pamachende apa paive neBandage. Ndakayeredza misodzi ndega hangu and i made a promise to myself kuti handisvire futi mukadzi wemunhu! That is kana mboro ikagona kumira futi…
Thanks for sharing my story…. Anorld
Related Topics:Ndakabatwa ndichisvira mukadzi wemunhu
Ndakaita kupomba Beche remwana weChikoro
Sekai musikana wematinji ukapusa unotundira pamuromo webeche